Otu n'ime ihe ndị Akwụkwọ Nsọ na-ekwekọghị na ya gosipụtara: ebe dị anya n'etiti Egypt na Israel bụ ihe dị ka kilomita 613, mana dịka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, Mozis na ụmụ Israel biri afọ 40 iji wuchaa njem ha ma banye n'ala ahụ a na-akpọ "nkwa"
Otu ihe ekwesighi baibul gosiputara: uzo di n’etiti Ijipt na Israel bu ihe di ka kilomita 613, ma dika akwukwo nso si di, Moses na ndi Israel were 40 afo iji mezue njem ha ma banye n’ala ekwere nkwa “Ndi ana akpo”
Site na: KongoLisolona: June 23, 2019 08: 08 5 Comments
Site na ịme ngụkọta dị mfe, ya bụ, na nkezi "Kwa ụbọchị" Moses na ndị Israel jere naanị mita 43. Ee, ogige 43, ihe fọrọ nke nta ka ọkara nke ihe onye Jamaica na-agba ọsọ Usain kpọchie mere na 5 sekọnd, mMozis na ndị ya bụ n'ezie "Nnukwu umengwụ! »
Gha banyere ngafe Oké Osimiri Uhie site na ụmụ Israel: akụkọ banyere ngafe Oké Osimiri Uhie site na ndị Israel bụ n'ezie-achọta na-akpa ọchị "Ọ bụ ezigbo akụkọ ifo"
Moses na-emeghe oké osimiri: enweghị sayensị emeela ka akụkọ ifo na akụkọ ifo kachasị njọ n'akụkụ ụwa a
Enweghị nkwekọ na ebe a. Onye obula dere edemede a ihe o nweburu. O rughi odide ederede Akwukwo Nso dika isi okwu a. (Ọnụ Ọgụgụ 14. Gụọ isiakwụkwọ dum)
Ọ bụ ntaramahụhụ sitere n'aka Chineke nye ndị ya, kpatara enweghị ekwenye.
Ihe omuma bu ngwa agha. Gịnị banyere ụgha? mana lee, ị na-ewetara ụnụ akụkọ na-ejighi akụkọ banyere Mozis nke ị na-ekwu.
Ọ bụ na ịgụghị akụkọ ahụ dum ma ọ bụ na ọ bụ na ọ ghọtaghị ihe ọ bụla gbasara akụkọ a.
Na mgbakwunye, dịka ederede ahụ si kwuo, ha bụ ndị 600,000 nọ na 20 afọ. Ya mere, ọ bụrụ na anyị tinye ụmụ nwanyị na ụmụaka na-ekwu mmadụ kachasị elu nke mmadụ 1,200,000.
Ọ bụrụ na anyị mee ka ha jide aka, anyị nwere ike ịme eriri nke 1,200,000 ... ma ọ bụ 1200 kms.
Yabụ na ha nwere ike ịkpụpụta agbụ mmadụ site na mmalite ha rue ebe ha na-aga… ihe fọrọ nke nta ka ọ laa azụ.
Ee Anon ma ọ bụrụ na ị gbakwunye ihe niile dịka onye ụgha na-ama ndị ọcha ahụ ha na-agwa anyị dị ka ụmụaka
Bible bụ akwụkwọ ime mmụọ. Jean 4: 23
Nọvemba 26 07: 56